मङ्गलबार, असोज १२ २०७८ ०५:०४ PM
चितवनमा ४७, दैलेखमा ६० र तनहुँमा ३० प्रतिशत मात्र रोपाइँ
शुक्रबार​ २७ असार २०७६ ११:३२ AM
काठमाडौं । चितवन जिल्लामा ४७ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । मनसुन ढिलो सक्रिय हुँदा र आकाशे पानीको भरमा रोपाइँ गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण जिल्लामा अपेक्षाकृत रोपाइँ नभएको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले जनाएको छ । केन्द्रका बाली विकास अधिकृत माधव पौडेलले जिल्लामा कूल धान रोपाइँ २८ हजार ६०० हेक्टरमध्ये आजसम्म करीब १३ हजार ३७० हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको जानकारी दिए । कार्यालयका प्रमुख सुधीर श्रेष्ठका अनुस...
सामूहिक टिमुरखेतीमा गल्याङका युवा
शुक्रबार​ २७ असार २०७६ ०८:५१ AM
स्याङ्जा । गल्याङ नगरपालिका– १० भिरालेका किसानले घरबारीको पाखो बारीमा रहेको झाडी फाँडेर सामूहिक टिमुरखेतीको सुरुआत गरेका छन् । बाँदर, मृगलगायतका जङ्गली जनावरले लगाएको खेतीबाली आएर हैरान बनेका किसानले...
अदालतको आदेशपछि कसरी सम्भव भयो तरकारीको विषादी परीक्षण ?
शुक्रबार​ २७ असार २०७६ ०७:३३ AM
काठमाडौं । अदालतले तत्काल विषादी परीक्षण गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेपछि प्रदेशस्तरीय विषादी प्रयोगशालामा विषादी परीक्षण सुरु भएको छ । भारतीय दूतावासले पत्रै पठाएर विषादी परीक्षण नगर्न सरकारलाई...
बिहीबार २६ असार २०७६ ०३:२४ PM
काठमाडौँ । नेपालमा एशियाली कृषकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सन्दर्भमा युवा जमातलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सो सम्मेलन हुनलागेको आयोजकले जनाएको छ । साउन...
बिहीबार २६ असार २०७६ १२:०७ PM
खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाभित्र गठित ३० कृषि समूहलाई आधुनिक कृषि सामग्री प्रदान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना खोटाङ र नगरपालिकाको लगानीमा खरीद गरिएको सामग्री कृषि...
सङ्कटापन्न जातका माछा संरक्षणको अभियानमा परशुराम नगरपालिका
बिहीबार २६ असार २०७६ ०९:४९ AM
डडेल्धुरा । डडेल्धुराको रङ्गुन नदीमा माछा संरक्षण अभियान सुरु हुने भएको छ । डडेल्धुराको भित्री मधेशमा पर्ने रङ्गुन नदीमा माछा संरक्षण तथा सम्बद्र्धनको व्यवस्था गरेर व्यवस्थित माछापालन अभियान अगाडि बढा...
तरकारी र फलफूलमा विषादीको प्रभाव कम गर्ने यस्ता छन ४ घरेलु उपाय
बिहीबार २६ असार २०७६ ०८:०९ AM
काठमाडौं । आयातित मात्रै नभइ नेपालभित्रै उत्पादन हुने तरकारी र फलफूलमा पनि विभिन्न विषादीका अवशेष रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। त्यस्ता विषादीको प्रभावबाट जोगिन घरभित्रै के गर्न सकिन्छ ? प्ला...
विषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी नल्याउन सर्वोच्चको आदेश
बुधबार २५ असार २०७६ ०५:५६ PM
काठमाडौं । सरकारले भारतीय तरकारीको व्षिादी परीक्षण नगरी ल्याउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।...
बुधबार २५ असार २०७६ ०५:२६ PM
धनगढी । कैलालीको मोहना सिँचाइ आयोजनाको मुहानमा पक्की नयाँ बाँध निर्माणले स्थानीय कृषकलाई सिँचाइको सुविधा पुग्ने भएको छ । नयाँ बाँध निर्माणपछि उक्त आयोजना निर्माण भएको ३२ वर्षपछि उपभोक्ताले स...
अलैँचीको बजार प्रवर्द्धनका लागि त्रिदेशीय साझेदारी अपरिहार्य
बुधबार २५ असार २०७६ ०५:१४ PM
पाँच स्थानीय तहमा ‘सुपर धान जोन कार्यक्रम’ विस्तार : १० हजार हेक्टर क्षेत्रफल छनोट
बुधबार २५ असार २०७६ ०४:०० PM
बुधबार २५ असार २०७६ ०८:३० AM
भारतीय दूतावास भन्छ, ‘सरकारी निकाय नै जीटुजीमार्फत मल आपूर्ति गर्न चाहँदैनन्’
मङ्गलबार २४ असार २०७६ ०६:१४ PM
सोमबार २३ असार २०७६ ०९:३१ PM
टिमुर खेतीतर्फ युवा
सोमबार २३ असार २०७६ ०४:२९ PM